အစ္စလမ်တို့သည်မြန်မာပြည်၏အဓိကအန္တရာယ်ပေလော? | မြန်မာပြည်သား
လူမှုဆက်ဆံရေးကွန်ယက် အင်တာနက်စာမျက်နှာတခုဖြစ်တဲ့ Twitter အနေနဲ့ လူမျိုးစုတင်းမာမှုတွေ ကို နောက်ထပ်မီးထိုး ပေးနိုင် တယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေက စိုးရိမ်တဲ့ ဖော်ပြချက်တွေကို မဖြုတ်ပစ်ဘူးဆိုရင်အရေးယူ လုပ်ဆောင်မယ်လို့ အိန္ဒိယ အစိုးရက ခြိမ်းခြောက်လိုက်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း အာသမ်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းတွေကိုလက်စားချေတဲ့အနေနဲ့ မူစလင်တွေက တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ကောလာဟလတွေ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပြန့်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အခု ညွှန်ကြားချက်ထွက်လာတာပါ။ အာသံပြည်နယ်က အဓိကရုဏ်းကြောင့် ဇူလိုင်လကတည်းကဆိုရင် လူ အယောက်၈၀ သေဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပြီး လူဦးရေ သုံးသိန်း အိုးအိမ်စွန့်ထွက်ပြေးနေရ ပါတယ်။ သတင်းမှားတွေကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတ၀န်းမြို့တွေက ထောင်ပေါင်းများစွာသော လူတွေဟာ သူတို့မြို့တွေကနေ အာသံပြည်နယ်ကအိမ်တွေဆီ ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ် အတွင်း ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ လှုံ့ဆော်နှိုးဆွပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ ဖော်ပြချက်တွေကို ချက်ခြင်းဖြုတ်ပေးဖို့ အိန္ဒိယအစိုးရက Twitter ကို ကြာသပတေးနေ့ မှာ […]
နိုင်ငံတကာက ထောက်ပံ့ကူညီရေးအဖွဲ့တွေအပေါ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရက တားမြစ်ကန့်သတ်မှုတွေ လုပ်နေတာ ဟာ မြန်မာ နိုင်ငံဖက်က ထွက်ပြေးလာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်မှု အခြေ အနေတွေ ပိုဆိုးစေတယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေးလေ့လာ မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ Human Rights Watch အဖွဲ့က ပြောလိုက်ပါတယ်။ နယ်စပ်ကနေ ရိုဟင်ဂျာတွေ ထပ်မံဝင်ရောက်လာဖို့ အားပေးရာရောက်တဲ့အတွက် ကူညီထောက် ပံ့မှုတွေ ပေးနေတဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့ သုံးခုကို အကူအညီပေးတာရပ်ဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရက ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်က အမိန့်ထုတ်ခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ့၊ ငတ်မွတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေး Action Against Hunger အဖွဲ့နဲ့ Muslim Aid အဖွဲ့တို့က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ Cox’s Bazaar မှာရှိနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် သောက်သုံးရေ၊ […]
နိုင်ငံသား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အများပိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းနှင့် မြို့တော်သစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖွဲ့စည်းရန် အစုရှယ်ယာ အဆိုပြုလွှာများ ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို သြဂုတ် ၂၁ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီက ဗဟန်းမြို့နယ် ဆရာစံလမ်းနှင့် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းထောင့် ဆရာစံပလာဇာရှိ သမဝါယမဘဏ်လီမိတက်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေက အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစ၍ ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့သော်လည်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီ အနည်းစုသာ ရှိခဲ့ကြောင်း ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုများသည် အနာဂတ်တွင် အရင်းအနှီးဈေးကွက် (Capital Market) ပေါ်ပေါက် လာစေရန် ဦးတည်ဆောင်ရွက်ခြင်း […]
သြဂုတ်လ ၂၃ ရက် လွှတ်တော်သတင်း
ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးက ပေးပို့လာတဲ့ သဝဏ်လွှာ ကို လွှတ်တော်နာယက ဦးခင်အောင်မြင့်က ဖတ်ကြားတင်ပြပြီး မှတ်တမ်းတင်ဖို့ ရှိပေမယ့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီက ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက် အစီအစဉ်ကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သမ္မတရဲ့ သဝဏ်လွှာနဲ့ အတူ ပူးတွဲ ပါရှိတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခအပေါ် သုံးသပ်ချက် ၁ဝ ချက်ထဲက ၉ ချက်ကို သဘောမတူ နိုင်တဲ့အတွက် ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဦးဆောင် ကန့်ကွက်သူ တဦး ဖြစ်တဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP ဥက္က ဒေါက်တာအေးမောင် က ပြောပါတယ်။ ဒီလို ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက် မနက်ပိုင်းမှာ ပုံမှန် ကျင်းပဖို့ ရှိတဲ့ လွှတ်တော် […]
သြဂုတ်လ ၂၃ ရက် လွှတ်တော်သတင်း -2
ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့ရဲ့ ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးပွဲ အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ၂ ဦးနဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့ သမ္မတ အိမ်တော်မှာ သီးသန့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်နဲ့ အခြေခံဥပဒေ ခုံရုံးအကြား အငြင်းပွားနေတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်တို့ ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရဲထွန်းက မဇ္ဈိမ သတင်းဌာနကို ပြောပါတယ်။ လွှတ်တော်ကော်မတီတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခြေခံ ဥပဒေခုံရုံး ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေက မကျေနပ်တဲ့အတွက် ခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်တွေ နှုတ်ထွက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ ဒီကိစ္စကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ပြီး ဖြေရှင်းဖို့ […]
The voice နှင့် သတ္တုတွင်းအမှု စက်တင်္ဘာ ၆ ရက်နေ့ အမိန့်ချမည်
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာန အပါအဝင် ဝန်ကြီးဌာန အချို့တွင် ငွေကြေး အလွဲသုံးစားမှုများ ရှိနေသည်ဟု ရေးသားသည့် အပတ်စဉ်ထုတ် The Voice Weekly ဂျာနယ်အား သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာနမှ အသရေဖျက်မှုဖြင့် စွဲဆိုထားခြင်းကို စက်တင်္ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ချမည် ဖြစ်သည်။ ထိုရေးသားချက်များသည် စွပ်စွဲရေးသားထားခြင်း မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ချမှတ်မည့် အမိန့်သည် လက်ရှိအစိုးရအား မှတ်ကျောက်တင်မည့် အရေးပါသည့် အချက်ဖြစ်သည်ဟု The Voice Weekly ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ဦးကျော်မင်းဆွေက ပြောသည်။ “ဝန်ကြီး ဌာနဆိုတာ အစိုးရတဖွဲ့လုံးကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ အစိုးရတဖွဲ့ဆိုတာ နိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ နိုင်ငံတော် ဆိုတာကလည်း ပြည်သူလူထု တရပ်လုံး ပါတယ်။ အဲတော့ […]
ခံစားရသူဘက်က တနင့်တပိုးကြီးပါအတွက် ပြန်လည်ဖြေရှင်းချက်
Hot News ဂျာနယ် Vol-3, No- 102, 9-15 Aug 2012 မှာပါတဲ့ “ခံစားရ သူဘက်ကတစ်နင့်တစ်ပိုးကြီးပါ” ဆိုသော သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးအနေဖြင့် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါသည်။ သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အချို့အချက်အလက်များဖော်ပြမှုမှာမှား ယွင်းနေပါသဖြင့် စာဖတ်သူအများ သိရှိ နိုင်ရန် တင်ပြလိုပါသည်။ ဇူလိုင်လ (၂၁)ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂း၀၀ နာရီ ၀န်းကျင်တွင် ထိုလူနာ အသက် (၈၈)နှစ် အား ဆီးကျိတ်ခြစ်ကု သမှု(TURP) ကို ခါးမှ ထုံဆေးထိုး၍ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ခွဲစိတ် ကုသရာတွင် နှလုံး၊ အဆုတ်၊ ဗိုက် စသောကျန်း မာရေး အခြေအနေများကို မေ့ဆေးဆရာဝန်ကြီး ၏ စစ်ဆေးချက်အရကောင်းမွန်၍ ခွဲစိတ် […]
“ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယင်းလတ် မြန်မာသို့ ထပ်မံလာရောက်ရန် စီစဉ်နေ”
ထားဝယ်ရေနက် ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေမှု များအား တွန်းအားပေးသည့် အနေဖြင့် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယင်းလတ်ရှင်နာဝပ်ထရာသည် နောက်လအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး Surapong Tohvichakchaikul က ယနေ့ပြောသည်။ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်၏ နှစ်ရက်တာ မြန်မာခရီးစဉ်တွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နှင့် တွေ့ဆုံသွားမည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ The Nation သတင်းစာက ရေးသားဖော်ပြထားသည်။ သမ္မတကြီးနှင့် တွေ့ဆုံရန် ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်း၊ ထားဝယ်ဆိပ်ကမ်း နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ Laem Chabang ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ဆက်သွယ်မည့် လမ်းဖောက်လုပ်ရေးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကို အဓိကထား ဆွေးနွေးမည်ဟုဆိုသည်။ ထားဝယ် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး […]
kokomyanmarpyithar | July 22, 2012	| အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၊ ပန်ဂျပ်ပြည်နယ် ၊ ဇူလိုင် ၂၁ ရက် ၂၀၁၂
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၊ ပန်ဂျပ်ပြည်နယ် ၊ ဇူလိုင် ၂၁ ရက် ၂၀၁၂
Yangon Business Expo 2012 ပြပွဲကျင်းပမည် ပြည်တွင်းပြည်ပကုမ္ပဏီများ ပူးပေါင်းပြသသော Yangon Business Expo 2012 ပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ ဦးဝိစာရလမ်းရှိ တပ်မတော်ခန်းမ၌...
Tags: featured	Category: သတင်း
« ပထ၀ီဝင်နိုင်ငံရေး နှင့်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များမှကောင်နှတ်ချက်	ဒုသမ္မတသစ်အရေး လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးနိုင်ဖွယ်ရှိ »	သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်နှင့် VOA Interview	မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် နှင့် CNA Interview	Online FM နားဆင်ရန်	Share to…….	မြန်မာ့သတင်းမီဒီယာနှင့် Website များ	မြန်မာပြည်သားကို ဆက်သွယ်ရန်	ပြည်သူများအတွက် သတင်းများကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ သိရှိစေရန် ဖော်ပြပေးပါမည်။သတင်းများပေးပို့လိုပါက author@myanmarpyithar.orgနှင့် kokomyanmarpyithar@yahoo.comသို့ဆက်သွယ် ပေးပို့ နိုင်ပါသည်။	ပြည်တွင်းသတင်းစာနှင့် ဂျာနယ်များ	မြန်မာ့အလင်း